Midowga Musharixiinta oo ka hadlay bannaanbixii rabshadaha watay ee ka dhacay Muqdisho - Awdinle Online
Midowga Musharixiinta oo ka hadlay bannaanbixii rabshadaha watay ee ka dhacay Muqdisho
Qoraal kasoo baxay Musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidanka dowladd ay rasaata si arxan darrida ah ugu fureen shacabkii Soomaaliyeed ee sida nabadda ah ugu mudaaharaadayey Magaalada Muqdisho, loona horjeeday Farmaajo.
Musharaxiinta ayaa Madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in dadkii dhigaayay banaanbaxa uu u adeegsaday ciidanka Gorgor iyo Haramcad oo ay dawladda Turkiga tababartay, ayna rasaasatii ay fureen ku dhaawacmeen saddex qof.
Sidoo kale Musharaxiinta ayaa sheegay in banaanbixii Maanta loo xiray laba qof, welina Taliska Booliska Gobolka Banaadir ay ku raad-joogaan dadkii ka qeyb galay banaanbaxa, iyagoona dalbaday in lasii daayo dadka la xiray, lana joojiyo baacsiga lagu haayo dadka.
Qoraalka Musharaxiinta xilka Madaxweynaha ayaa waxaa lagu caddeeyay in Madaxweyne Farmaajo uu diidan yahay inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, sidoo kalena uu diiday in la dhigyo banaanbaxyo, lana qabto kulamo siyaasadeed.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay rasaas Ciidanka dowladda Federaalka ay Maanta ku fureen dad Muqdisho ka dhigaayay banaanbaxyo xoogan, waxaana uu sigaar ah uga dhacay degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Cabdicasiis.
Hoos ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Musharaxiinta xilka Madaxweynaha.
Previous articleSomaliland iyo Kenya oo ku heshiiyay 10 Qodob
Next articleBeesha Caalamka oo War kasoo saartay khilaafka siyaasadeed ee dalka